Soomaaliya: Ku dhawaad toban ku dhimatay dagaal - BBC News Somali
Soomaaliya: Ku dhawaad toban ku dhimatay dagaal
Image caption Ciidamada Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya Baydhabo waxay sheegayaan in dagaal culus ay kooxda Al-Shabaab saaka ku qaadday ciidammada dawladda ee ku sugan tuulada Goofguduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
ku dhowaad toban qof oo ah dhinacyadii dagaallamayay ayaa ku dhintay dagaalka saaka iyadoo dhaawacuna uu kor u dhaafayo labaatan qof. Sagaal ka mid ah dhaawacyadaasi ayaa la soo gaarsiiyay isbitalka magaalada Baydhabo.
Kooxda Al-Shabaab waxa ay dagaal muddo socday kaddib kula wareegtay Goofguduud balse markii dambe ciidammada dawladda oo gurmad helay ayaa dib u qabsaday tuulada.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ayaa la sheegaya in tiro hoobiyaala ay ku dhaceen degmada Wardhiigley kuwaas oo geystay khasaare nafeed.
Inta la xaqiijiyay labo qof oo midkood ay ahayd haweeney ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen kaddib markii ay saddex hoobiye ku dhaceen xarunta degmada Wardhiigley iyo xero barakacayaal oo ku dhow.
War ay soo saartay kooxda Al-Shabaab ayay ku sheegtay in tiro madaafiic ah ay maanta duhurkii ku weerartay xarunta madaxtooyada ee villa Soomaaliya oo ku taal degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda.